Izindaba - Filter Press Operation
Cindezela ipuleti yokuhlunga: xhuma ukunikezwa kwamandla, qala imoto bese ucindezela ipuleti lokuhlunga lomshini wokuhlunga. Nakekela ukuhlola inani lamapuleti wokuhlunga ngaphambi kokucindezela ipuleti yokuhlunga, ezohlangabezana nezidingo. Ngeke kube nodaba lwangaphandle phakathi kokufakwa uphawu kwepuleti lokuhlunga, nendwangu yokuhlunga iyoba isicaba epuletini lokuhlunga ngaphandle kwemibimbi.
Ukulondolozwa kwe-2: ingcindezi yemishini ifinyelela ingcindezi yomshini wokuhlunga
Ukuhlunga kwe-3.Feed: ngemuva kokufaka isimo sokugcina ingcindezi, hlola isimo sokuvula nokuvala kwe-valve ngayinye yepayipi, bese uqala iphampu yokuphakelayo ngemuva kokuqinisekisa ukuthi alikho iphutha. Uketshezi lokuphakelayo lungena ekamelweni ngalinye lokuhlunga ngembobo yokuphakelayo kupuleti lokufaka, bese licindezela futhi lihlunga ngaphansi kwengcindezi ebaluliwe yokwenza ikhekhe lokuhlunga kancane kancane. Nakekela ukubona ushintsho lwe-filtrate nokuphakelayo kwengcindezi ngesikhathi sokudla. Qaphela ukuthi izinga lamanzi lempompo yokuphakelayo kufanele libe elejwayelekile, futhi inqubo yokuphakela kufanele iqhubeke, ukuze kugwenywe umehluko wengcindezi obangelwa ukuvinjelwa komgodi wokuphakelayo nokudabuka kwepuleti lokuhlunga. Lapho i-filtrate iphuma kancane futhi ingcindezi yekhekhe ifinyelela ngaphezu kuka-6kg, iphampu yokuphakelayo izovalwa.
4.Khipha ipuleti lokuhlunga bese ususa ikhekhe lokuhlunga: vula amandla, qala imoto, udedele ipuleti lokubamba bese ususa ikhekhe lokuhlunga.
5.Cleaning nokuqedela isihlungi sendwangu: hlanza indwangu yokuhlunga njalo. Lapho uhlanza futhi uqeda indwangu yokuhlunga, hlola ngokucophelela ukuthi indwangu yokuhlunga ilimele yini, noma ngabe imbobo yokuphakelayo kanye nomgodi wokuthengisa uvinjiwe, futhi ubhekisise ngokucophelela ukungena kokuphakelayo njalo ukuze ugweme umehluko wengcindezi nokulimala kwepuleti lokuhlunga.